Rustu Recber Goolhayihii Xulka Turkiga Iyo Kooxda Barcelona Ayaa Laga Helay Xanuunka Sii Faafaya Ee Coronavirus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Barcelona ayaa noqotay kooxdii ugu dambaysay ee waddanka Spain ka dhisan ee uu usoo yeedhay war aan fiicnayn oo ah in laacib ugu soo ciyaaray uu hadda dhibbane u yahay xanuunka Coronavirus oo uu cusbitaal ku jiro.
Goolyahihii caanka ahaa ee xulka qaranka Turkey ee Rustu Recber oo sidoo kalena u ciyaari jiray Barcelona ayaa la dhigay cusbitaalka, sida ay xaqiijisay xaaskiisa Isil oo farriin ay ku daabacday barteeda Instagram ugu caddaysay taageereyaashiisa in halyeygeeda uu ku dhacay xanuunka Coronavirus.
Rustu Recber oo u ciyaaray Barcelona muddo saddex sannadood ah oo qaybo ka mid ah amaah loogu diray kooxda Fenerbahce ee ka dhisan waddanka Turkiga, waxa uu ahaa halyeygii xulka qaranka Turkey ee Koobkii Adduunka 2002 ay dirqiga ku reebtay Brazil.
Xaaska Rustu Recber ee Isil ayaa farriinteeda waxay ku sheegtay in saygeedu uu ka mid noqday dadka dhibbaneyaasha u ah caabuqa Coronavirs, waxaanay tidhi: “Waxaan idinla wadaagayaa war kale oo xanuunka Coronavirus ah, xaqiiqadana waa in sida ugu wanaagsan loosoo bandhigo, laakiin waxaan ka xumahay inaan idiin sheego in saygayga Rustu uu ku jiro cusbitaal oo laga daaweynayo xanuunka COVID-19.
“Waxa aanu ka naxnay calaamadaha sida degdegga ah usoo baxay iyadoo wax walba ay caadi yihiin. Waxa jira waqtiyo dhibaato iyo adayg, waxaan se Allah uga baryayaa inuu caafimaad siiyo dhamaan bukaannada uu ku jiro saygayga qaaliga ah.
“Codsiga kaliya ee aan dadka u jeedinayaa waa inay xoogaa taxadar iyo ixtiraam muujiyaan inta hawshani socoto. Baadhitaano lagu sameeyey gabadhayda iyo wiilkayga waa laga waayay xanuunka, waxaana kaliya laga helay saygayga.
“Sababtan darteed, guriga ayaanu joognaa xilli uu isagu cusbitaalka ku jiro, la noomana ogola in aanu aragno. Xaqiiqdii, tani waa waxa ugu adag, in aanaan awoodin inaanu la joogno.
“Allah ayaa weyn, Allah ayaanu rumaysanahay, waxaananu aaminsanahay dhakhaatiirta Turkiga Waxaan rajaynayaa in tan laga gudbi doono.”
Rustu ayaa ciyaaraha ka fadhiistay sannadkii 2012 iyadoo ay da’diisu tahay 39, waxa uu xulka qarankiisa u ciyaaray 120 kulan, laakiin waqtigiisa Barcelona ee kudhowaad saddexda sannadood ahaa ayaa ku dhamaaday niyad-jab iyadoo kaliya uu toddoba kulan u ciyaaray.